ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၂ ) | Ma Shwe Mi
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၂ )
October 25, 2009 at 5:31 pm2comments	ဆရာမြသန်းတင့် က ၁၉၄၅-၅၀ တစ်ဝိုက်လောက်ကတည်းက ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ လူချင်းခင်မင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ၁၉၅၉ မှာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့လည်း သူ့နောက်အိမ်ထောင် ဦးအောင်ဇေယျနဲ့ က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကတည်းက ခင်မင်ခဲ့ကြတာမို့ စာပေမိတ်ဆွေသဘောမက ပုဂ္ဂ္ဂိုလ် ချင်း မိသားစုချင်းပါ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ပုံစံမျိုး လို့ ရေးထားပါတယ်။
ဒီလိုစာရေးဆရာ တစ်ယောက်က ရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ပုံရိပ် ဆိုတော့ မရွှေမိ သိချင်သမျှ တော်တော်ကြီးကို စုံစုံလင်လင်ပါပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ခပ်ပါးပါးပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ဟာ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘ၀၊စာပေဘ၀တွေကို အကောင်းဆုံးခြယ်မှုန်းထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လုိ့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာမ၊ဂျာနယ်၊သတင်းစာထုတ်ဝေသူ၊တိုင်းရင်းမြန်မာ့ဆေးပညာကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးကုသပေးသူ၊အဲဒီခေတ်ကြီးတုန်းက အမျိုးသမီးတွေထဲမှာရှားပါးလှတဲ့၊အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွား၊အလုပ်လုပ်နိုင်သူ စတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အပေါ်ယံမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေ မကပဲ ခန်းဆီးနောက်ကွယ်က ဘ၀ ကိုပါမြင်အောင် ဖွဲ့ထားတဲ့စာအုပ်ပါ။
အလှအပ၊အကောင်းကြိုက်ပုံကို အိပ်ခန်းထဲက ဘီရိုမှာ ထဘီ အထည် ငါးရာလောက်ရှိပြီး အလဲလဲဝတ်တယ်၊မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ အလှအပ အသုံးအဆောင် အကောင်းစားတွေအပြည့်၊ရယ်ဗလွန်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအရောင် အမျိုးမျိုး၊ခရစ်စယန်ဒီယော ရေမွှေးပုလင်း ဆိုက်စုံ၊ပေါင်ဒါဘူးမျိုးစုံကို တွေ့ ရတာနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတယ်။
၁၉၅၀ သူတို့ စခင်ကြတဲ့အချိန်မှာ ၀တ်စားဆင်ယင်ထားပုံကို တော့ ရှပ်အကျီလိုကော်လာ ပိုးပျော့ လက်ရှည် နံ့သာရောင်၊ အပြာရောင်ဂျော်ဂျက်ထမီ ၀တ်ပြီး ကြိုးသိုင်းဖိနပ် အဖြူရောင် ၀တ်ထားတယ် လို့ ရေးထားတယ်။
ခမ်းခမ်းနားနားနေထိုင်တတ်တာကိုတော့ …ကျယ်ပြန့်ခမ်းနားပြီး အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ ထမင်းစားခန်း၊ မှန်ပြတင်းကြီးများတွင် လိမ်မော် ရောင်ခန်းဆီးရှည်ကြီးတွေကာထားပြီး အခန်းထောင့်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံလုပ်ရေခဲသေတာ၊ပြောင်လက်တောက်ပတဲ့ မဟော်ဂနီရောင်ထမင်းစားစားပွဲ… ၊အိမ်ငှားနေတာတောင် သံအရာရှိတွေပေးတဲ့ လခမျိုး ပေးပြီး နေပုံ၊အစားအသောက်ကောင်းစားပုံ၊ ဆီတစ်ပိဿာ သုံးကျပ်ခေတ်မှာ အိမ်က မီးဖိုချောင်ဈေးဖိုးက တစ်နေ့ တစ်ရာလျော့မယ် မထင် စတာတွေနဲ့ ရုပ်လုံးဖော်ထားပြန်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘူး။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးဟာ အနေအထိုင် အပြုအမူ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်း ဧည့်ခန်းထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ သူ့ကို လူတွေက စိတ်ဝင်စားလာအောင် ၊ အာရုံရောက်လာအောင် ဧည့်ခန်းထဲသို့ ခမ်းနားစွာဝင်ခြင်း (Grand Entrance) ကိုလည်း အတတ်ပညာတခု အနေနဲ့ တတ်တယ် လို့ ဆရာ မြသန်းတင့်က မှတ်ချက်ပေးထားပြန်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ အရင် ဆောင်းပါးတွေမှာ မဖတ်ဖူးတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေပေါ့လေ။ အဲဒီခေတ် က အမြင်နဲ့ ဆရာမြသန်းတင့်ကိုယ်တိုင်ကိုက ဂျာနယ်ကျော်မမလေး နေပုံထိုင်ပုံတွေကို စာရေးဆရာတစ်ယောက် အနေနဲ့ ခမ်းနားလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့တယ်တဲ့။ တစ်သက်လုံးက အကောင်းကြိုက်လာပြီး ခမ်းခမ်းနားနားနေလာတဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အတွက်တော့ သူမျှော်မှန်းသလိုဖြစ်ဖို့ မနားတမ်းကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။
သားသမီးတွေအတွက်ကျပြန်တော့လဲ အဲဒီခေတ်က တတ်နိုင်သူလက်ငါးချောင်းတောင်မပြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ သားနှစ်ယောက်ကို ဒါဂျီလင်ထိတောင်ပို့ပြီး ကျောင်းထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သားသမီးသုံးယောက်အပေါ်မှာ သူမထားတဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေက လဲထင်သလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဆရာက ဆိုတယ်။ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရဲ့ ဘ၀ ဟာ အောင်မြင်တဲ့မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းပါတဲ့။
ခြုံပြောရရင် ဒီစာအုပ် ကလေးဟာ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့  ဘ၀ခရီးအတက်အကျတွေကို ဘက်မလိုက် အမှန်အတိုင်း ဘေးလူတစ်ယောက်က မြင်တဲ့အတိုင်းရေးထားလို့ မရွှေမိ အတွက် တော့ ဒီနေ့ ထိပြန်ပြန်ဖတ်နေမိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ အလွတ်ရသလောက်တောင်ရှိနေပြီ။😛
ဒီလောက်ဆို မရွှေမိရဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ဋီကာ ပြီးသင့်ပြီပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် မပြီးသေးပါဘူး😛 မရွှေမိပြောခဲ့တယ်လေ ။ တခုခု ကိုကြိုက်မိပြီ ဆို အသဲအသန် လုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာ ။
ဆောင်းပါးတွေအရ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး မှာ သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်။ ဒေါ်ခင်လေးမြင့်၊ဦးသိန်းတန်၊ဦးမိုးဟိန်း. ။ အဲဒီမှာ ဦးသိန်းတန်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီ။
မရွှေမိ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ၁၉၉၉ လောက်ပါ။ အဲဒီမှာ ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ဒေါ်ခင်လေးမြင့် ကို အရမ်းတွေ့ဖူးချင်တာ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ် ကိုယ်ဒီလောက် သဘောကျတဲ့စာရေးဆရာမကြီးကို မမှီလိုက်ပေမယ့် သူ့ သားသမီးတွေကိုတော့ တွေ့ဖူးချင်တယ်လေ။ ဆောင်းပါးတွေမှာ ရေးထားလို့ တောင် အလွတ်ရတော့မယ်။ ဒေါ်ခင်လေးမြင့်အကြောင်း ကို လုံမေပျို နဲ့ နောက်ဖေးပေါက်ဆိုပြီးရေးထားတာ ရှုမ၀မှာဖတ်ဖူးတာကိုး။ အဲဒီအချိန်က ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်ကတောင် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ် စာအုပ်ကိုမထွက်သေးဘူး။
ဒီတော့ ဖတ်ဖူးတာတွေအရ ဒေါ်ခင်လေးမြင့် က ပြင်သစ်သံရုံးမှာလုပ်တယ် ဆိုတာသိရတယ်။ ပြင်သစ်သံရုံးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ပင်စင်ယူသွားပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ လိပ်စာမေးလိုက်တယ်။ လိပ်စာက သင်္ကန်းကျွန်း ၁၆-၄ ရပ်ကွက်တဲ့။ အမယ်လေး ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်မလျှော့ပါဘူး။ အဲဒီလိပ်စာနဲ့ စာရေးထည့်လိုက်တယ်။ သမီးက ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကို အရမ်းသဘောကျတဲ့စာဖတ်သူပါ၊ အန်တီ့အကြောင်းတွေလဲဖတ်ဖူးပါတယ်…ဘာညာဘာညာ…ပေါ့။စာကအရှည်ကြီးပဲ။ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်သေး။ ဆက်ချင်လဲဆက်ခဲ့နိုင်အောင်ပေါ့။
အသက် ၁၈နှစ်လောက်က လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တာတွေကလဲ အခုနေပြန်တွေးတော့ ပြုံးချင်စရာပဲ။ ခုသာ အဲလိုလုပ်ပါဆို ရှက်နေမှာနဲ့ လုပ်ဖြစ်မယ်မထင်။
နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ ဒေါ်ခင်လေးမြင့်ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်ရှင့်။ မရွှေမိက သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကိုထည့်ပြောထားတော့ အဲဒီဆောင်းပါးတောင် သူ့မှာ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်ရချင်တယ်တဲ့။ ဒီကလဲ ပေးချင်နေတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ချိန်းလိုက်ပြီး တစ်ရက် အိမ်လာခဲ့ပါမယ်ပေါ့။ အမယ်..အဲဒီတုန်းကများ ဖုန်းပြောတာ ရင်တွေခုန် အသံတွေတောင်တုန်လုိ့ 😛
ဒါနဲ့ပဲ ရန်ကုန်ေ၇ာက် စ မလည်မ၀ယ်မှာမှ သင်္ကန်းကျွန်းထိဆိုတော့ ပိုဆိုး ။ အိမ်က အမကို အဖော်ခေါ်ပြီး စမ်းတ၀ါးဝါး သင်္ကန်းကျွန်းကိုသွားကြရော။
အိမ်ကိုတော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်။ ရပ်ကွက်လေးတွေထဲမှာ လမ်းလေးတွေကလဲ ဟိုကွေ့ ဒီပတ်နဲ့ ဆိုတော့။ နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ ပါပြီ။ အိမ်လေးက ၀င်းမရှိဘူး။ နှစ်ထပ်အုတ်တိုက်လေး။ ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်လေးတွေထဲမှာတွေ့ ၇တတ်တဲ့ သာမန်အိမ်ပုံမျိုးလေးပဲ။
အိမ်ကိုတွေ့ တော့ အံ့သြသွားမိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှန်းထားမိတာက ပြင်သစ် ဆိုဘွန်းတက္ကသိုလ်ကနေတောင် ပါရဂူဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးလို ခမ်းခမ်းနားနား နေလာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သမီး အနေနဲ့ တိုက်ကြီးတာကြီးကိုမမှန်းတောင်မှ နဲနဲ decent ဖြစ်တဲ့အိမ်မျိုးလေးပေါ့နော်။ ထားပါလေ။ ဒါတွေပြောနေရင် အပေါ်ယံပကာသန ကိုမက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ရင်ထဲမကောင်းလှတာ အမှန်ပဲ။
ဒေါ်ခင်လေးမြင့် ကိုတွေ့ရတာတော့ မှန်းထားတဲ့ရုပ်အတိုင်းပဲ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ ပိုဆင်ပေမယ့် ဆရာမကြီးရဲ့ မျက်နှာက မထန်ပဲ ချိုသာတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ပြင်သစ်ဆန်ဆန်မျက်နှာမျိုး ။အဲခေတ်က ဒီဂျီတယ်ကင်မရာတွေခေတ်မစားတော့ ဆရာမကြီးပုံတွေကို မရလိုက်ပါဘူး။ သိချင်ရင်တော့ La Vie En Rose ဇာတ်ကားရဲ့ ဇတ်ကောင် ပြင်သစ်အဆိုတော် Édith Piaf ရဲ့ ရုပ်နဲ့ တော်တော်ဆင်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ အပြင်မှာ မျက်ခုံးမွေးသေးသေးဆွဲ ၊နှုတ်ခမ်းနီဆိုး၊လှလှပပပြင်ပြီး မျက်နှာချိုပါတယ် ။ မျက်နှာပုံစံက မြန်မာသိပ်မဆန်ပါဘူး။
Entry filed under: ဂျာနယ်ကျော်မမလေး, စကားစမြည်. Tags: .	ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၁ )	မရွှေမိ သိသလောက် ဂျာနယ်ကျော်မျိုးဆက်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း	2 Comments Add your own
Anonymous | June 1, 2014 at 5:25 pm
thanks. pls write more about it. I’m her fan too.
DD | June 10, 2010 at 2:56 pm
so interesting, waiting for new post